I-Adobe Photoshop - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kweendaba kwiividiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
Udidi: Adobe Photoshop
I-Adobe Photoshop ngumhleli womfanekiso we-raster ophuhlisiwe kwaye ushicilelwe ngu-Adobe Inc. kwi-MacOS ne-Windows. I-Photoshop yadalwa ngo-1988 nguTomas noJohn Knoll. Ukususela ngoko, kuye kwaba yinkalo ye-facto yecandelo kwi-graphics edijithali yokuhlela imifanekiso, ukuya kwinqanaba lokuba i-Photoshop ibe yinto yokuthengisa eyenza ukuba isebenzise njengesenzi, njengokuthi "ukufotoza umfanekiso," "i-photoshopping" kunye "nomncintiswano we-photoshop" , nangona i-Adobe ikhubaza ukusetyenziswa okunjalo. I-Photoshop iyakwazi ukuhlela nokubhala imifanekiso ye-raster kumaqela amaninzi kwaye isekela imaski, udidi lwe-alpha kunye nemizekelo emininzi yembala equka i-RGB, i-CMYK, i-CIELAB, umbala webala kunye ne-duotone. I-Photoshop isebenzisa iifom zefayile ze-PSD kunye ne-PSB ukuxhasa ezi zinto.